မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုဖို စဉ်းစားနေတာလား?? ဖုန်းပြင်သင်တန်းဘယ်မှာတက်ရမလဲလို့ တွေးနေတာလား ?? - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Unlabelled မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေဝမ်းကြောင်းပြုဖို စဉ်းစားနေတာလား?? ဖုန်းပြင်သင်တန်းဘယ်မှာတက်ရမလဲလို့ တွေးနေတာလား ??
Min Oaker at 11:25:00 AM
Sony Erlcsson E16ifirmware တင်​နည်း​လေးရှိရင်​ကူညီ​ပေးပါခင်​ဗျား အခက်​ခဲ​တွေ့​နေလို့ပါ
SonyErlcsson E16i farmwareတင်​​နည်း​လေးရှိရင်​ကူညီ​ပေးပါခင်​ဗျား